बिना सफा मेकअप हटाउँदै - उत्तम चरणहरू र उत्पादनहरू | बेजिया
बिना सफाई कसरी मेकअप हटाउने
सुसाना Godoy | 19/07/2021 10:00 | सुन्दरता
वाइप बिना मेकअप हटाउन सम्भव छ र उत्पादनहरू जुन हामी जान्दछौं। यद्यपि तिनीहरू मेकअपलाई बिदाइ गर्नका लागि सबैभन्दा सरल तरिकाहरू मध्ये एक हो, हामी आफ्नो छालाको बिरूद्ध सधैं राम्रो कदम चाल्दैनौं। तसर्थ, अरू विकल्पहरूमा शर्त जस्ता केही छैन।
किनभने मेकअपलाई विदाइ दिनुका साथै हामीले स्वस्थ छालामा पनि शर्त लिनु पर्छ र यसैले सही चरणहरू अनुसरण गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। हामी केवल एउटा मात्र पत्ता लगाउँदैनौं, तर यी मध्ये धेरै चरणहरू तपाईंको लागि मेकअपलाई बिदाइ र नमस्कारलाई अझ सजिलो बनाउनको लागि। बढी हेरचाह छाला.
1 बिना सफा तर micellar पानी संग मेकअप हटाउनुहोस्
2 सफा गर्ने दुध
3 मेक-अप हटाउने तेलहरू
4 कोन्जाक स्पन्ज
5 किन सफासँग मेक-अप हटाउने छैन
बिना सफा तर micellar पानी संग मेकअप हटाउनुहोस्
यद्यपि त्यहाँ उत्पादन छ कि रहन यहाँ छ, कि छ micellar पानी। त्यसकारण हामी मध्ये धेरैले पछाडि उसको लागि छोडिदिन्छौं। पानीको रूपमा यसको बनावट, यसको नामले सुझाव गरे जस्तै, एकल पासमा मेकअप हटाउँदछ। यो सम्पूर्ण अनुहारको लागि तर आँखाको लागि पनि उत्तम छ। तपाईं यसलाई कपासको बलले हटाउन सक्नुहुन्छ र यसरी प्रक्रिया छिटो र सजिलो बनाउन सक्नुहुन्छ। मेकअप हटाउनुको साथसाथै यसले छाला नरम, टोन र सुधार गर्दछ, यसले गर्दा हुने मॉइश्चराइजिंग प्रभावलाई बिर्सनु हुँदैन। यी सबैको लागि, यो ध्यानमा राख्नको लागि फर्म बेट्स मध्ये एक हो।
सफा गर्ने दुध
यद्यपि micellar पानी एक पूर्ण क्रान्ति को रूप मा प्रस्तुत गरीएको छ, सफा गर्ने दूध सबैभन्दा आधारभूत उत्पादनहरू मध्ये एक हो तर कुनै कम महत्त्वपूर्ण। सफा बाहेक, यो अत्यधिक हाइड्रेटिंग हो। यस कारणले, यो सुख्खा हुँदैन, तर बिल्कुल विपरीत। यो यस कारणका लागि शुष्क छालाका लागि उपयुक्त छ, तर सबैभन्दा संवेदनशीलको लागि पनि। तिनीहरूलाई सफासँग छोड्नुको साथसाथै, यसले उनीहरूको हाइड्रेसनको लागि नरम स्पर्श पनि दिन्छ।
मेक-अप हटाउने तेलहरू
जे होस्, यो विचार गर्नका लागि पहिले विकल्पहरू मध्ये एक होइन, यो उल्लेख गर्नु पर्छ तेलले हामीलाई धेरै भिटामिनहरू प्रदान गर्दछ र पक्कै पनि हाइड्रेसन पनि हाम्रो छाला को लागी। त्यसकारण यसको ख्याल राख्नु अधिकतम हामी तिनीहरूलाई शर्त लगाउन सक्छौं। जोजोबा वा बदामको तेल हाम्रो घरमा कहिल्यै अभाव हुन सक्दैन। किनकि ती प्राकृतिक छन् र केही बूँदाहरूसँग हामी पर्याप्त हुनेछौं। यदि तपाईं सुक्खा छाला छ भने तिनीहरू पनि तपाईं को लागी उपयुक्त हुन्छन्।
पक्कै पनि तपाइँलाई यो पनि थाहा छ किनकि यो महान अत्यावश्यक मध्ये एक भएको छ। यसैले यो तपाइँको मेकअप ब्यागमा हुनुपर्दछ। ठिक छ, निश्चित छ कि तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ एक उत्पादन संग वा एक्लै प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो स्पञ्ज बहुउद्देश्यीय हो र यसैले यसलाई यति धेरै मनपर्दछ। यदि तपाईंले ओसिलो बनाउनुभयो भने, यो नरम हुनेछ र मेकअप हटाउने काम अझ सजिलो हुनेछ। थप रूपमा, तपाईको छालाको प्रकारमा निर्भर गर्दै तपाई यसको लागि बिभिन्न विकल्पहरू छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
किन सफासँग मेक-अप हटाउने छैन
सत्य यो हो कि यी विकल्पहरू हेरेपछि, यसले हामीलाई कुरा गर्न अग्रसर गर्दछ कि पछाडि बिना मेकअप हटाउन सम्भव छ। सत्य यो हो कि यदि तपाईंले समय समयमा यो कदम चाल्नुभयो भने केही पनि हुनेछैन। तर तिनीहरूको लगातार प्रयोग गर्नाले तपाईंको छाला राम्रो र राम्रोसँग सफा नहुन सक्छ। के कालोमा ब्लैकहेडहरू देखा पर्दछ र ब्ल्याकहेड्स देखा पर्दछ र यसका सबै भेरियन्टहरू। यसको यौगिकहरूको कारण उनीहरूले छाला पनि सुक्खा बनाउन सक्छन्, विशेष गरी के खराब हाइड्रेटेड छालाको झुकाव छ। तसर्थ, हामीले यसको यथासम्भव सीमित गर्नु पर्छ र पानीले छाला सफा गर्नुका साथै माथिका उत्पादनहरूको लागि अप्ट इन गर्नुपर्दछ, जुन सधैं राम्रो उपाय हो। र तपाईं? के तपाइँ मेकअप रिमूभर वाइपहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सुन्दरता » बिना सफाई कसरी मेकअप हटाउने
बरौनी लिफ्ट के हो?